Isitayela sesiGreki - akuyona into efana nayo yasendulo, nakuba inezici ezithile. I-interior ne-Hellenistic motifs yindawo egcwele ukukhanya kwelanga nomoya onomoya omnene, ukugxila kwenduduzo yasekhaya kanye nenhlalakahle, indawo lapho uhlale efuna ukubuyela khona. Lokhu kuqondiswa ngumdwebo wombala ojabulisayo: ama-shades ajulile e-azure, ama-turquoise, ama-ocher, ama-orange omnyama ne-lemon yegolide aphindaphinda inhlanhla yemvelo yamathafa e-Peninsula yaseBalkan.
Ekuklanyeni nasekuklanyeni, kunendima ekhethekile enikezwa ukuhlanganiswa kwemidwebo yemvelo. Izinkuni ezikhanyayo ezingenakubalwa, itshe elibi futhi i-marble ephosiwe, i-tt engamatshwayo kanye ne-plaster eqoshiwe yizozinto ezingenakukwazi ukuphinda ziphinde ziphinde ziphinde ziphinde ziphinde ziphinde zibuke isitayela sesiGreki.
Ifenisha elula yamafomu angenasikhuthazo aqhubeka nomlando wokuphila okulula kwamaGreki. Ama-bright accents angasebenza njengama-panels angama-mosaic, amathayili ahlukahlukene, aphikisiwe noma aqoshiwe. Ukuthinta kokuqeda kukhona izinto zokuhlobisa nge-ceramic kanye ne-terracotta ware, izindwangu ezivela ku-flax engaphenduliwe, kanye nemidwebo enezihloko zama-antique.
Igumbi lezingane nge feng shui
Izindwangu zekhishi: imithetho yokuzikhethela futhi uzenze ngokwakho
Izimfihlo zangaphakathi zesitayela se-Provence
Umbala obomvu ngaphakathi kwekhishi
Imibono indlela yokuhlobisa indlu yonyaka omusha
Ingaphakathi ngesitayela se-Romanesque
Igumbi lezingane lokukhanyisa
Amazambane abhakawa "Garmoshka"
Ukwelashwa okuphumelela kakhulu kwe-couperose kanye ne-asterisks ye-vascular
Abakwa-Scammers basebenzisa izinombolo zeselula ezincane
Funda ukucabanga ngendlela enhle
Izici zokudla kwesifo sezinso
Amaphutha abesifazane ekukhulumisaneni namadoda
Indlela yokupheka i-feijoa: izindlela zokupheka ezinhle nezithombe
Ukuzivocavoca okuphumelelayo kakhulu kokulahlekelwa kwesisindo esimangalisayo
I-Buckwheat ne-shank ku-multivark
Yikuphi ukudla okumelwe udle ukuze kungabi ngcono?
Isimo sezulu eMoscow naseMoscow Region ngoJanuwari 2018: Izibikezelo ze-Hydrometcentre ekuqaleni nasekupheleni kwenyanga
I-Cosmetology: kungani ungakwazi ukucindezela ama-pimples
Ukwelashwa kokuvuvukala kwamakhambi omuntu we-nasopharynx